Iflethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo enekhitshi elikufutshane neBaga - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo enekhitshi elikufutshane neBaga
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNikhil
Ithe nca embindini weBaga, umgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kumzila weTito, le yiflethi okanye indlu ekwicomplex enekhitshi elincinci. Iflethi ikwi-Resort. Sinepuli yokuqubha. Igumbi le-studio line-AC entsha enebhedi elala abantu ababini etofotofo. Kukho igumbi lokuhlambela elivulekileyo nelicocekileyo.
Nceda uqaphele ukuba iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke kunye nePuli zivaliwe ngenxa yeCOVID.
Nceda undithumelele umyalezo ngeqhosha elithi "Qhagamshelana Nombuki Zindwendwe" ngaphambi kokubhukisha xa kukho into engaqondakaliyo
Le yindlu yeStudio, eyakhelwe kumbindi weBaga. I-Baga yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eGoa. Zonke iindawo zasebusuku ezidumileyo ezifana neTito's, iMambos, ikhefi yaseKapa, iindawo zokutya ezifana ne-Infantaria, iSouza Lobo, iFat Panda, iTyotyombe kunxweme lwaseBaga zikufutshane kakhulu kule ndlu.
★ 1 Ifriji entsha
★ Ikhitshi elinezipheko kunye nezitya
★ Igumbi lokuhlambela eli-1 elibanzi, elicocekileyo nelitsha
★ Itafile yeKofu kunye neSofa
★ Inverter Power Backup izibane kunye nabalandeli.
Eli gumbi lihlala ligcinwe kakuhle linebhedi enkulu yeQueen. Uyakubuliswa ngevumba elimnandi xa ungena nje eApartment. Kukho igumbi lokuhlambela eli-1 labucala. Igumbi lokuhlambela linamanzi ashushu nabandayo. Kukho ikhabhathi enedrowa ezibekwe ezantsi kwe kitchenette.
Uya kuyixabisa indawo esembindini oya kuba nayo ngelixa uhlala kule ndlu.
Nceda ucofe ku-*Qhagamshelana nomamkeli* phambi kokuba ubhukishe ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
4.65 out of 5 stars from 152 reviews
4.65 · Izimvo eziyi-152
I-Baga yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eGoa. Ulwandle lwaseBaga, iiKlabhu, iiPubs, iindawo zokutyela, iMidlalo yaManzi, amatyotyombe aseLwandle, amaziko okuthenga, Utshintshiselwano ngemali, iivenkile zamatye anqabileyo, njl.njl zonke zikwindawo engaphantsi kwesiqingatha sekhilomitha ukusuka kwindlu yam.
Ndihlala ndifumaneka kwifowuni okanye kwincoko. Cofa kwi-host host ukuba unayo nayiphi na into oyibuzayo. Ndiza kuzama ukukunceda ngako konke endinako ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Calangute